Puntland Archives - Puntland Mirror Believable Media Website
June 2, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa ayaa soo afjaray khilaaf u dhaxeeyay asbuucyadii la soo dhaafay kadib kulan ka dhacay madaxtooyada maanta oo Talaado ah. Khilaafka u dhaxeeyay Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni iyo ku […]
August 14, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah magacaabay afar kamid ah guddiga doorashooyinka Puntland, sida lagu sheegay digreeto ka soo baxday xafiiska afhayeenka baarlamaanka Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed Dhoobo. Magacyada afarta xubnood ayaa […]
February 16, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Habeenkii Isniinta ee taariikhdu ahayd 11 Febraayo 2019, Madaxweynaha cusub ee Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiiradda. Golaha cusub ee wasiiradda ayaa ka kooban 18 Wasiir, 21 […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa Saynab Ugaas Yaasiin u magacaabay wasiir ku xigeenka maaliyada, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday madaxtooyada Puntland maanta oo Khamiis ah. Saynab ayaa bedeli doonta wasiir ku […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa toogasho ku fulisay lix nin oo ay ku eedeeyeen in ay basaas u ahaayeen Dowladda Federaalka Soomaaliya, Mareykanka iyo Kenya, sida ay ku warantay warbaahinta Al-Shabaab maanta oo Talaado ah. [...]